Recep Tayyip Erdogan, ayaa gaaray Magaalada Nairobi (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa gaaray Magaalada Nairobi ee dalka kenya, halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay.
Erdogan, ayaa waxaa Garoonka ku soo dhaweeyay Madaxweynaha dalka Kenya Uhurru Kenyatta iyo Marwadiisa iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Dowladda Kenya.
Madaxweynaha Turkiga ayaa booqasho labo maalin qaadan doonto wuxuu ku joogi doonaa dalka Kenya, iyadoo maalinta beri ah oo Jimco ah uu ka soo tagi doono dalkaasi.
Wararka waxa ay sheegayaan in maalinta beri ah uu ku soo wajahan yahay Magaalada Muqdisho, oo uu furi doono Xarunta Safaarada Turkiga ee Muqdisho.
Magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Maka Al-Mukarama ayaa waxaa la sii suray calamada wadamada Somaliya iyo dalka Turkiga, taasi oo muujinaysa Diyaargarowga loogu jiro Imaanshaha Wafdiga Madaxweynaha dalka Turkiga.
Inkastoo shalay Magaalada Muqdisho Shabaab ay ka geysteen weerar ay ku qaadeen Hotelka Ambassador oo dad badan ay ku dileen, ayaanan la ogeyn waxa iska bedeli doono Safarka Erdogan ee Muqdisho.